Mysticism of Chernobyl: tranga mampatahotra mifandray amin'ny loza
Ireo biby dia nandao an'i Chernobyl talohan'ny loza, satria fantatr'izy ireo fa tsy ho ela dia hivoaka ny vavahadin-tserasera.
Ny loza voajanahary lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia nitranga tamin'ny 26 aprily 1986 tao amin'ny toby famokarana angovo nokleary Chernobyl. Ny fipoahan'ny voka-bindaha fahefatra dia nahatonga fahafatesan'olona maherin'ny 200.000 sy mahatsiravina, ary ny isan'ny isan'ireo niharam-boina, araka ny tombatombana samihafa, dia olona 3-4 tapitrisa manerana ny faritra voina. Mbola mitodika any amin'ny tsiambaratelo sy angano maro izy - ireo mpialoha lalana sy vokatra hafahafa ...
Ny antsipiriany sasany momba ny hamehana dia tsy najanona tao amin'ny sekretera henjana afa-tsy am-polony taorian'ireny tranga mahatsiravina ireny. Ary tsy momba ny tena isan'ny niharam-boina, fa ny zava-nitranga teo alohany ihany koa. Tamin'ny volana Janoary, efa-bolana talohan'ilay loza, dia tsy nisy biby fiompy afa-tsy tao anatin'ny 30 kilometatra miala ny toerana misy ny fipoahana. Ny biby dia nanomboka nanao fihetsika hafahafa - dia nokapohin'izy ireo ny lohany nanohitra ny rindrina ary nanjary nanakorontana, nanozongozona ary nirohotra nanodidina ny trano.
Tao amin'ny gazety "Molody Ukrainy" tamin'ny volana febroary tamin'io taona io ihany, nisy lahatsoratra iray nilaza fa samy tsy hita popoka daholo ny biby. Nandositra izy ireo, ary nosoratana ho an'ny aretina maro io tranga io. Ny lahatsoratra rehetra tao Chernobyl dia nihantona tamin'ny filazana ny valisoa ho an'ireo biby fiompy hita, saingy tsy nisy hita. Averina fa biby an-tapitrisany no nandao ny tranony tamin'ny faniriany, niandrandra ny tsy fisian'ny olana?
Tobim-pahefana nokleary Chernobyl - vavahady iray mankany amin'ny helo?
Iray tamin'ireo mpandray anjara tamin'ireo hetsika tao Chernobyl, Lydia Arkhangelskaya, taona maro lasa izay dia namoaka ny tsangambatony tsy hitsidika ny faritra voina. Niaiky izy fa tsy nahita antokon'olona iray afa-tsy olona, ​​tany am-piasana. Hoy i Lydia:
"Na dia ny voay aza tsy nitangorona. Mampatahotra izany. Talohan'ny nandehanana hatory, dia matetika no niresadresaka ny zava-nitranga tamin'ilay toby nokleary nokleary - tsy nino izahay fa mpahay siansa ireo nanao azy. Nolazain'izy ireo fa misy zavatra hafa - toy izany, nanokatra ny fidirana ho any amin'ny helo ireo mpahay siansa ary ny tena ratsy dia afa-nandositra ny tontolo ambanin'ny tany. Nilaza ireo mponina ao an-toerana fa ny ampitso taorian'ny nahitana ilay loza dia nahita ny endrik'ilay devoly. "
Aliens - fahavalo sa mpanampy?
Ny vavolombelona nanatri-maso dia nanambara zavatra momba ny zavatra hafahafa tany an-danitra ihany koa, toy ny mpanidina volkano. Ny manam-pahaizana Sovietika Vladimir Azhazha dia nanamafy fa ny vahiny dia manana tànana amin'ny zava-nitranga tao Chernobyl. Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany tamin'ny 2009, dia nanome tafa sy dinika izy:
"Nanadihady olona mihoatra ny zato aho izay nahita ny UFO androany hariva ny zava-nitranga tany Chernobyl, sy ny alin'ny loza, ary herinandro vitsivitsy taty aoriana. Amin'ny ankapobeny, karazana efatra tsy hita maso no notandremana tany amin'ny faritry ny NPP Chernobyl. Ireo dia "disques" nentim-paharazana nentim-paharazana miaraka amin'ny kôlôba avy any ambony, sigara, maivana ary manova ny loko miloko sy triangles. Te-hino aho fa tonga amin'ny fanampiantsika ny saina vahiny. "
Nanaraka azy izy ireo, dia nivezivezy nanangona kaonty nanatri-maso sy manam-pahaizana hafa tao amin'ny paroasy. Valery Kratokhvil, mpahay siansa iray avy ao Gostomel, dia nanangona sy nandinika ny fijoroana vavolombelona vavolombelona izay nandray anjara tamin'ny famafana ny vokatry ny voina, izay tsy nanam-potoana hiresahana ny teo alohany. Ny ankamaroan'izy ireo dia nahita ny baomba nipoitra teny an-tampon'ny lanitra. Ary aorian'ny 1986, dia matetika ny UFO no hita ao amin'ny Chernobyl. Na izany aza, tsy te hifandray mivantana amin'ny olona izy ireo.
Taorian'ilay loza dia nanomboka niely haingana ny momba ireo biby matanjaka, ireo biby maromaro ary ireo olona mamirapiratra ao anaty haizina. Tsy misy afaka manamarina ny fisiany, nefa misy porofo fa misy legimasy mbola tsy nisy toy izany.
Tsy dia ampy loatra ny tany manodidina an'i Chernobyl, noho izany dia nanangona cesium radio sy strontium izy, toy ny sponjy. Ireo metaly tena mampidi-doza ireo dia manana ny anjara andraikitry ny zezika. Ny olona dia nampiasa azy ireo ho sakafo ary nahatonga aretina mahafaty izay tsy hoe ny vatany ihany no niova, fa ny fahatsiarovan-tena ihany koa.
Inona no dikan'ny hoe Leo?
Ambasady Singapore any Minsk
Masoivohon'i Singapore ao Moskoa
Inona no atao hoe Anton
Ambasady any Malta
Inona ny anaran'i Valery?
Safidio anarana ho an'ny zaza vao teraka
13 dia mamitaka ny mpamitaka eo amin'ny olo-malaza
Ny fivoahana amin'ny alàlan'ny tsindrona isa-latabatra izay tokony hozahan'ny mpandala ny alika rehetra
Fanatanjahantena ho an'ny hozatry ny vagina
Lila - famantarana
Afovoan-tsolika - ahoana no hiady?
Boky volamena |
Metzingen avy any ivelany
16 olona fantatra amin'ny autisme
Mpandray anjara tonga lafatra
Hyperemia amin'ny hoditra
Kristen Stewart dia hanala sarimihetsika fohy momba ny herin'ny vehivavy anaty
Mamy mofomamy ao an-trano - recipe